मजदुरलाई हेप्नी ! : RajdhaniDaily.com
Homeभर्खरैमजदुरलाई हेप्नी !
मजदुरलाई हेप्नी !
गरिबबिनाको काठमाडौं ‘नर्क’ समान
सरकारले लकडाउन घोषणा गरे लगत्तै हतारिएर गाउँ हिँडेको राजिब (परिवर्तित नाम) ले एक महिनासम्म गाउँमा मस्ती ग-यो । बा रुख चढन नसकेको बुढो काभ्रोको रुखमा चढ्यो । घाँस झा-यो । बनमा गएर घोचा काट्यो र भित्री बारीमा बार लगायो । अब तीन वर्षलाई ढुक्क भो । भित्रीबारीमा बाख्रा पस्यो भन्दै उसको आमाले छिमेकीलाई गाली गर्नु पर्ने छैन । मोल बोक्यो, बाँझो बारीमा ट्याक्टर लगायो । बा,आमाका लागि बर्खाभरिलाई पुग्ने दाउरा पनि जोहो गरिदियो । अहिले गाउँमा उसका दमौली धेरै जम्मा भएका छन् । खसी काटे, कुखुरा काटे । बनमा गएर ऐसेलु काफल पनि खाए ।
दिदीको घर एकघन्टा टाढा थियो । भाइ भेटन भन्दै दिदी आई । दिदीसंगै भान्जा भान्जी पनि आए । सबै जहान जम्मा भएपछि मिठा परिकार बनाएर खाने संस्कार नै उसको घरमा पनि त्यसै भयो । बा र आमाले गरेको खेतीकै भरमा सँधै मिठो सम्भव थिएन । काठमाडौं बसेको छोराले पसलमा किन्न जाँदा आमासंग पैसा माग्ने कुरा पनि भएन । उसको गोजी रित्तियो । एकसातामा लकडाउन खुल्ला र काठमाडौ फर्किम्ला भनेर गाउँ हिँडेको राजीब एक महिना गाउँ बसेपछि काठमाडौ फर्कियो ।
आफ्नै मोटरसाइकलमा काठमाडौ आएको उसलाई काठमाण्डौ भित्रन खासै समस्या परेन । चेकिङका लागि राजमार्गमा बसेका प्रहरीले परिचयपत्र हेर्दै टाढैबाट जानुस् भने । उ काठमाडौमा मोटरसाईकलमा सामान बोकेर पसल पसलमा बिक्री गथ्र्यो । त्यहि सामान बिक्री गरेबापत आउने थोरै कमिशनले जीबिका चलाउथ्यो । केही बचाउथ्यो पनि । कोरोना भाइरसको हल्ला चलेसंगै उ बैंकलगायत भिडभाड हुने ठाउँमा जान छाडेको थियो । केही पैसा डेरामै राखेर हिँडेको राजीब त्यहि सिरानीमुनी राखेको पैसा लिन काठमाडौ आएको थियो ।
‘ए भाई किन आएको यस्तो संक्रमणको बेलामा ?’
एकसातादेखि नधोएको मैलो कपडाको मास्क लगाएर उभिएको अवस्थामा घरबेटी अंकलसंग गेटैमा भेट भयो ।
‘काठमाडौं कस्तो भयो भनेर बुझ्न आएको नि ?’
घरवेटी अंकललाई उसको कुरा चित्त बुझेको थिएन ।
‘यस्तो लकडाउनको बेला कहाँ हिँडन पाइन्छ । अब यहि बस्ने हो भने मैले बनाएको नियम मान्नु पर्छ । बिहान एकपटक तरकारी किन्न जान पाइन्छ । तरकारी किनेर आइसकेपछि भित्र बाहिर गरिरहन पाइन्न ।’
घरबेटी अंकल अरु पनि केही भन्न खोज्दै थिए । उ आफ्नो कोठामा गएर पैसा निकालेर आइसकेको थियो ।
‘अंकल म त पैसा सकिएर आएको आजै गाउँ फर्किन्छु । बरु तपाइले मुखमा लाउनु भएको मास्क मैलो भएछ । धुनुस् नत्र त्यहि मास्कबाट तपाईलाई संक्रमण हुन्छ ।’ अंकलले हत्तपत्त मास्क झिके र हेरे । राजिब बाइक स्टार्ट गरेर अघि बढ्यो ।
रामेछापबाट काठमाडौं आएका घरबेटी अंकलले कलंकीमा तीन आना दुई पैसामा दुई तले घर बनाएको १० वर्ष भयो । एक तलामा आफु बस्छन् एकतला भाडामा दिएका छन् । भाडा धेरै लिन पाइन्छ भनेर चार कोठामा चार परिवार राखेका छन् । दुई परिवार गाउँ गए, दुई परिवार यहि छन् । त्यो दुई परिवारलाई थुनेर राखेका घरबेटी अंकललाई फोहोर मास्कले संक्रमण फैलन्छ भन्ने थाहा छैन तर, कोठामा बस्नेलाई बाहिर जान दियो भने संक्रमण फैलन्छ भनेर चिन्तित छन् ।
गाउँमा छँदा राम्रै गरेको थियो राजीबले । हल गोरु गोठमै थियो । बाख्रा, कुखुरा ,एउटा लैनो भैंसी । आफ्नै बारीको खेतीले वर्षभरि खान पुग्थ्यो । दिदीहरुको बिहे भएपछि बा, आमा र उसले खेती धानेका थिए । उसका उमेरका प्राय खाडी हिँडे । केही काठमाडौं छिरेका थिए । खाडीबाट पठाएको रेमिट्यान्सले छिमेकीले खरको छानो फालेर रंगीन जस्ता हाले । सुटकेश काँधमा बेकेर फर्किनेहरुले चहकिलो बत्ती (बोकेर हिँडने लाईट)संगै रंगीन टिभी पनि ल्याए । खरको छानो लगाएको उसको घरमा रंगीन टिभी कल्पना भन्दा टाढाको विषय थियो ।
राजीब शहरमा बस्ने एउटा गरिब पात्र हो । बाध्यताले शहर छिरेको राजीबले साइकल चढेर हिँड्दा मोटरसाइकल चढने सपना देखेको थियो । त्यसपछि नयाँ सपना देख्न छाड्यो । बा आमाले हामीले सकेनम् गाउँ आइज नभनेसम्म मात्रै काठमाडौंमै बस्ने योजना छ उसको ।
छिमेकीका छोराहरु रंगीन टिभी बोकेर गाउँ भित्रने बित्तिकै उसका बाआमालाई लाग्न थाल्यो । ‘हाम्रो छोरो त सिल्ली पो रहेछ ।’ घरमै बसेर हरेक दिन आफैंलाई काम सघाउने छोराको कर्मप्रति उमेरले ६० कटेका बाबु आमाले गर्व गर्न सकेनन् । ‘एकपटक देश नचाहर्ने छोरा काम लाग्दैन ।’ आमाले भनिन् ।
‘तेरो छोराको आँट छैन, यस्ता सिल्लीको के कुरा गर्नु ।’ बाले थपे ।
दसै तिहारमा पँधेरामा भिड हुन्थ्यो । शहरमा बस्नेहरु नयाँ रुमाल, साबुन, सेम्पु बोकेर नुहाउन जान्थे । राजिब पनि त्यहि भिडमा नुहाउथ्यो । उ भन्दा कालो छाला भएकाहरुको हातगोडा सुकिलो थियो तर, राजिबले जति घोटे पनि आफ्नो कुकुच्चा सुकिलो बनाउन सकेन ।
‘तँ त म भन्दा गोरो थिइस् तेरो खुट्टा किन यति कालो ।’ शहरमा बस्नेहरुले सोध्थे । उसंग जवाफ थिएन ।
यता कुकुच्चाको मैलो नगएकोमा त पीडा थियो नै । छिमेकीहरुले क्रमश रंगीन जस्ता लाउन थालेपछि उसलाई लाग्यो । ‘मेरो घर गाउँकै झुप्रो ।’ तीनवटा खसी बेच्यो, जस्ता लायो । ब्याउने भैंसी बेच्यो रंगीन टिभी पनि किन्यो । यी सबै गर्दा पनि बा आमाको चित्त बुझाउन सकेन र काठमाडौं हानियो । जीबीकोपार्जनका लागि साइकलमा सामान बोकेर पसल पसल बिक्री गर्दै हिँड्यो । यसैगरि बचाएको पैसाले अहिले मोटरसाइकल किनेको छ ।
राजीब शहरमा बस्ने एउटा गरिब पात्र हो । बाध्यताले शहर छिरेको राजीबले साइकल चढेर हिँड्दा मोटरसाइकल चढने सपना देखेको थियो । त्यसपछि नयाँ सपना देख्न छाड्यो । बा आमाले हामीले सकेनम् गाउँ आइज नभनेसम्म मात्रै काठमाडौंमै बस्ने योजना छ उसको । उ जस्तै एउटै कोठामा डाइनिङ, किचन र बेडरुम बनाउनेहरुका कारण कतिपय घरबेटीहरुको काठमाडौंमा जीबिका चलेको छ । यसलाई यसरि पनि नबुझौं । घर भाडा नलगाइकन खान पुग्नेहरु पनि छन् । तर, संसारमा त्यस्तो कुनै पनि शहर छैन, जहाँ हेुनेखानेहरु मात्रै बसुन् तर, यो सम्भब छैन । धनी र गरीब हरेक शहरका एक अर्काका परिपुरक हुन् ।
एकछिन कल्पना गर्नुस् त । यदि, गरिब नहुने हो भने यो शहर कति कुरुप हुन्छ होला । गरिबहरु भनेका हरेक शहरका सौन्दर्य हुन् । गरिबलाइ भगाएर हाम्रो जस्तो शहर कहिल्यै समृद्ध हुन्न । यदि काठमाडौंवाट गरिब भगाउने हो भने नर्क समान हुन्छ काठमाडौं ।
अहिले कतिपय कम्पनि सञ्चालकहरु आफ्ना कम्पनिमा कार्यरत मजदुर काठमाडौंबाट बाहिरिएकोमा मख्ख छन् । घरेलु कामदारलाई गाउँपालिकासंग समन्वय गरेर उसकै घर पठाएका छन् । कतिपय सुकिला मुकिलाहरुलाई भ्रम छ ‘संक्रमणको मुल कारक भनेकै गरिवहरु हुन् । गरीब, मजदुर र ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुकै कारण शहर संक्रमित हुनसक्छ ।’ संक्रमणले धनी र गरिब कहिल्यै छुट्याउदैन । चीन, स्पेन, इटली, अमेरिकालगायतका मुलुकमा कोरोना भाइरसबाट गरिब मात्रै मरेका छैनन् ।
एकछिन कल्पना गर्नुस् त । यदि, गरिब नहुने हो भने यो शहर कति कुरुप हुन्छ होला । गरिबहरु भनेका हरेक शहरका सौन्दर्य हुन् । गरिबलाइ भगाएर हाम्रो जस्तो शहर कहिल्यै समृद्ध हुन्न । यदि काठमाडौंवाट गरिब भगाउने हो भने नर्क समान हुन्छ काठमाडौं । सामान्य कुरा गरौं न, शहरमा हरेक दिन हरेकको भान्सामा फोहोर जम्मा हुन्छ । गाउँमा हुनेहरुले त भान्सामा जम्मा भएको फोहोर गाइबस्तुको थलो वा मल खाल्डोमा राख्छन् । शहरमा त्यो सम्भव छैन हरेकले आफ्नो घरमा जम्मा भएको फोहोर प्लाष्टिकको बाल्टिमा जम्मा गर्दै फोहोर बोक्ने व्यक्तिको प्रतिक्षा गरेर बसेका हुन्छन् । काठमाडौं लगायत कुनै पनि शहरको फोहोर धनीमानीले उठाएको थाहा छैन ।
अरु कुरा छाडौं सबै भन्दा ठूला पीडा हामीलाई आफन्तको निधन हुँदा हुन्छ । हिन्दु संस्कार अनुसार व्यक्तिको निधनपछि अन्तिम संस्कार चितामा जलाएर गर्ने गरिन्छ भने अन्य समुदायले आफ्नो ऋति रिवाज अनुसार खाल्डो खनेर गाड्ने चलन हुन्छ । पशुपति वा बनकालीमा गएर हेर्दा देखिन्छ । हुनेखानेहरुले आफन्तको अन्तिम संस्कार गरिँदा लास जलाउने चिता कुनै गरिबले बनाइरहेको हुन्छ । बनकालीमा खाल्डो खन्ने काम पनि गरिबहरुले नै गर्छन् । दुई जना श्रीमान श्रीमतीका लागि भात पकाएको भाँडा माझ्न अल्छि मानेर घरेलु कामदार राख्नेहरुले गरिबकै कारण कोरोना भाइरस संक्रमण हुन्छ भन्दै पन्छिएको अलि हजम हुन्न कि ?
कोरोना संक्रमितले भरियो टेकु अस्पताल, टहरामै बिरामीको उपचार (फोटोफिचर)
सत्यन श्रेष्ठ - August 4, 2021
काठमाडाैं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । लगातार नयाँ इतिहास कायम गर्दै अगाडि बढेको...
३,३८३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, २४ जनाकाे मृत्यु
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ३८३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । १० हजार ६३८ नमुनाको पीसीआर परीक्षणमा २ हजार...
काठमाडौं । फुटबलको पछिल्लो विवादका विषयमा छानबिन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले मंगलबार सदस्य पुरेन्द्रविक्रम लाखेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । एन्फाका...
बिहानी खासै खुलिसकेको छैन । हिजोदेखि धुर्मैलो आकाश मन्दमन्द निन्यारो छ । केटाकेटीका कल्याङबल्याङ अलि चर्कै सुनिइरहेको छ । ‘मम्मी भरे स्कुलबाट फर्केपछि पेन्सिल किन्दिनु...
राहतभन्दा महत्वाकांक्षी परियोजना अघि बढाइने
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न तत्कालीन राहत उपलब्ध गराउने कार्यक्रमभन्दा दीर्घकालीन र महत्वाकांक्षी परियोजना अघि बढाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।...
वडा सचिवको नेतृत्वमा पाँचौं पटक दलित समुदायमाथि कुटपिट
बैतडी । दशैको दिन थियो, आफ्नै वडाका वडासचिव नैनसिंह रोकायाको नेतृत्वमा आएका ब्यक्तिहरु राति ११ बजे दलित समुदाय काँडा गाउँमा पुग्यो । राति उक्त...
अरियो र बिभत्सु छनोट
स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेश २ असफल
८ केजी अफिम र १३१ केजी गाँजासहित ३ जना पक्राउ
अमेरिकामा एक सरकारी कर्मचारीले बैठकमै गोली चलाउँदा ९ को मृत्यु
फेरि विवादमा तानिए वनमन्त्री आले, विषय विज्ञ नियुक्ति गर्ने ठाउँमा सल्लाहकारका पत्नी नियुक्त
छोरी चाहन्छिन अभिनेत्री ऋचा शर्मा
सिटिजन्स बैंकद्वारा आर्थिक सहयोग
बजार पूँजीकरण झण्डै २३ खर्ब पुग्यो, नेप्सेमा उच्च अङ्कको वृद्धि
निषेधाज्ञासँगै गरिनुपर्ने थप तयारी